'कांग्रेस शुद्धिकरण हुनुपर्छ भनेर पञ्चायतकालमा पनि जुत्ता पोलिस गरिएको थियो' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘कांग्रेस शुद्धिकरण हुनुपर्छ भनेर पञ्चायतकालमा पनि जुत्ता पोलिस गरिएको थियो’
Posted by Milap Subedi | १९ माघ २०७४, शुक्रबार १३:१० |
फरक धारणा र कांग्रेसभित्र आफ्नो स्पष्ट धारणाका कारण पुर्व सांसद समेत रहिसकेका रामहरी खतिवडा समय समयमा अभिव्यक्तिकै कारण चर्चामा आउछन । चुनावमा पराजित भएपनि भर्खरै गाँउमा चिसोपिडितलाई कम्बल वितरण गरेर फर्किएका खतिवडा अव कांग्रेस फेरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन । केहीदिन अघि राजधानीमा केही नेताहरुले जुत्तामा पालिस लगाएर कांग्रेस सुधार्ने तरिका उनलाई मन परेको रहेनछ । कांग्रेसलाई जुत्ता पालिस लगाएर परिवर्तन होईन कृष्ण प्रसाद भट्टराईको विचारलाई अबलम्बन गरेमात्र अव कांग्रेस फेरिन सक्नेमा उनको जोड छ । यिनै विषयमा राज ढुंगानाले गरेको संक्षिप्त कुराकानी यस्तो छ
चुनावमा पराजित भइसकेपछि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
– निर्वाचनमा पराजित भए पनि म आफ्नो जिल्लामै केन्द्रित छु । १२ सयवटा ज्याकेछ, टाउजर र टोपी मेरो जिल्लाको जन्तरखानी र राराजित र विभोटारका क्यारिसुमो भन्ने संस्थालाई अनुरोध गरेर विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरें । त्यसपछि साथीहरुसँग भेटघाट गर्न दुई चार दिन काठमाडौं बसें । कांग्रेस अहिले पराजित भएको कुरा सत्य हो । अब कुन बाटो तय गर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका छौं । पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग मैले भेट गरें । पार्टी पराजयका विषयमा छलफल गर्‍यौं । त्यसलगत्तै मेरो जिल्लामा कतारमा बस्ने साथीहरुले एम्बुलेस ल्याएका थिए, त्यो वितरण गरियो । आफ्नो एफएमसँग सहकार्य गरेर वृद्धाका लागि ७० वटा ब्लाङकेट वितरण गरियो । कांग्रेस पराजित भए पनि अहिले नेपाली जनताको मनमा कांगे्रस नै पहिलो र प्रिय पार्टी हो, जसले अप्ठ्यारा परेका बेला जनताको अधिकार स्थापित गर्ने काममा हामी निरन्तर लागेका छौं ।
तपाईं जिल्लामा कम्बल वितरण गर्ने, कोही राजधानीमा जुत्ता पालिस गर्दै थिए ?
– यो राजनीतिमा नयाँ कदम हो, शुद्धिकरण हुनुपर्छ भनेर पञ्चायतकालमा पनि त्यसै गरिएको थियो । जो नेताहरुले यो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई बधाइ दिन चाहन्छु ।
तपाईंको समर्थन छ ?
– किसुनजी मेरो आदर्श पुरुष हो, किसुजीलाई जति सम्मान हिजो पोलिस दल्नेहरुभन्दा कम हाम्रो छैन । किसुनजीसँग सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहने म हुँ । हस्पिटलको बेडमा किसुनजीलाई अन्तिम खाना खुवाउने मान्छे मै हुँ । उहाँले प्राण त्याग गरेपछि सञ्चारकर्मीलाई खबर गर्ने पनि मै हुँ । अहिले प्रतिष्ठान छ, त्यहाँ हामी निरन्तर जान्छौं । प्रतिष्ठान नदेखेका र किसुनजीलाई कहिलेकाहिँ गाली गर्नेहरु हतार हतार जुत्ता पालिस गर्ने कार्यक्रममा उहाँहरु सहभागी हुनुभएछ । उहाँहरु किसुनजीलाई नेता मान्न तयार हुनुभयो, खुशी लाग्छ । किशुजीले प्राण त्याग्दै गर्दा उहाँको खल्तीमा २ सय ४५ रुपैयाँ मात्र थियो । किसुनजी त्यस्ता राजनेता हुन् जसको नाममा एक टुक्रा जग्गाजमिन थिएन । अहिले नेपाललाई त्यस्तो राजनेताको आवश्यकता छ । जुत्ता पालिस कार्यक्रममा मलाई पनि निमन्त्रणा थियो, म आदरणीय दमन ढुंगाना, नीलाम्बर आचार्य र ओमकार श्रेष्ठ, पूर्ण खड्का सबै गएका थियौं, त्यसबेला हामीले चक्र बास्तोलालाई पनि भेटेर आयौं । त्यहाँ छलफल भएको थियो । आवेगमा आएर जुत्ता पालिस गरेर मुलुक निर्माण हुँदैन । जुत्ता पालिस लगाउने नेताहरु हिजोका दिन के गर्नुभयो, अबका दिनमा कम्तीमा आफ्नो जुत्ता पालिस गर्न अरुलाई नदिनुस् । त्यो एउटा स्वाभिमानता हो । किसुनजी कहिले पनि जुत्ता अरुलाई पोलिस गर्न दिनु हुँदैन थियो, मोजा आफै धुनुहुन्थ्यो ।
तपाईंको धारणा फरक समूहको हो ?
– फरक समूह भन्न मिल्दैन । अहिले नेपालको राजनीतिमा विकृतिहरु देखिरहेको छ । किजुनजी नभएको देश कति फरक हुँदो रहेछ भनेर सांकेतिक रुपमा देखाउन खोजिएको हो भने वास्तविमा यो असाध्य राम्रो काम हो । किसुनजीको नाममा आबेगमा आएर काम गर्ने, कुरा अर्कोतिर गर्ने र क्षणिक प्रचारमा आउन गरिएको हो भने यो गलत हो ।
हिजो जस्तै छ कांग्रेस ?
– हिजोको जस्तो कांग्रेस अहिले छैन, पोलिस गर्न बाटामा बस्ने साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, किसुनजी अन्तिम समयसम्म हिन्दूअधिराज्यको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, भलै म अहिले त्यो पक्षमा छु छैन बेग्लै कुरा हो । किसुनजी संवैधानिक राजाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । पोलिस गर्नेहरु संवैधानिक राजाका पक्षमा हुनुहुन्छ रु देखाउने किसुनजी, काम अर्कैतिर गर्ने हो भने गलत हुन्छ ।
Previousसुवारेजको निर्णायक गोलले बार्सिलोना विजयी
Nextचैतदेखि बीस वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक !
चीन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. भट्टराईले लेखेको ‘होसीयारी चिठ्ठी’ यस्तो छ !
३ असार २०७५, आईतवार १८:०४
३८ क्वीन्टल सुन प्रकरणमा नेपाललाई यूएईको सहयोग: गृहमन्त्रीलाई यूएईका राजदूतले दिए भ्रमणको निम्तो
१० श्रावण २०७५, बिहीबार १७:१४
२ पुष २०७५, सोमबार १०:४३
वागीलाई पाखा लगाउँदै सल्यानमा टेकबहादुरको ह्याट्रिक, वाम गठबन्धनका सबै उम्मेदवार विजयी
२५ मंसिर २०७४, सोमबार ०९:१३